နေ့ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အုတ်မြစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း - Forex Lens
အားလုံး4/အခမဲ့ Live တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ0/EURUSD0/Forex ပညာရေး0/Forex ကနှေးနေရင်မြန်အောင်0/Forex ထရေးဒင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း0/Forex ထရေးဒင်းဘလော့ဂ်0/စတင်ခဲ့သည်4/ညွှန်းကိန်း0/ထရေးဒင်း ROOM တွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်0/စီမံခန့်ခွဲ Accounts ကို0/စျေးကွက်ပညာရေး3/စျေးကွက်အမြင်0/မီဒီယာ0/သတင်း0/နည်းပညာပိုင်းအားသုံးသပ်ခြင်း0/Uncategorised 0
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2020/Op Ed ကအားဖြင့်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2020/forexlens အားဖြင့်
တစ် ဦး ကုန်သွယ်ရေးဆရာရယူခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2020/forexlens အားဖြင့်
ကုန်သွယ်ရေး Execute မှညာဘက်ပွဲစားရှာဖွေခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2020/forexlens အားဖြင့်
ကုန်သွယ်ရေးလောကမှာစိတ် ၀ င်စားသူတွေကိုငါပြောချင်တာကမင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးကုန်သွယ်မှုကိုမစဉ်းစားခင်မှာပထမ ဦး ဆုံးနဲ့ဗဟုသုတအခိုင်မာဆုံးရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဒီဟာကအရေးကြီးတယ် ဤသည်လွယ်ကူသောကောက်ယူရှာဖွေနေငါးမန်းများနှင့် piranhas တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါးသေးသေးလေးများအနေနှင့်ဤရေတွင်ရေကူးခြင်းသည်လွန်စွာဆိုးဝါးနိုင်သည်။ ဝေလငါးများနှင့်အတူစီးနင်းရသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏နဂါးကိုဖမ်းမိပါကရေထဲ၌သွေးရှိလျှင်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာအကြောင်းပြောနေတာကကုန်သွယ်ရေးကမ္ဘာဟာသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့တူတူပဲ။ Cousteau's နည်းနည်းပဲကြမ်းပြင်ကိုခြစ်မိတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတစ်သက်တာတစ်လျှောက်စုဆောင်းနိုင်တဲ့အဆုံးမဲ့အချက်အလက်တွေရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီရှာဖွေမှုရဲ့အနုပညာကဒီအချက်အလက်တွေကိုသူ့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးပုံစံကိုဖြိုဖျက်ပြီးအဲဒီအပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါကလုပ်ပြီးထက်ကပြောသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အဲဒီကိုရောက်ဖို့အခြေခံတွေကိုသာမကဘဲလုံခြုံရေးရှုထောင့်တွေကိုပါလေ့လာသင့်တယ်။ သင်၏အသက်ကယ်သမားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရသည့်နည်းအတိုင်းဤလိုက်စားခြင်းကိုလိုက်နာပါ။ မီးမရှိ၊ ဝါယာကြိုး၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဖန်ခွက်စသည့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုမကယ်တင်မီသင်၏အန္တရာယ်ကို ဦး စွာသတိပြုရမည်။ သီအိုရီအရသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကိုကယ်တင်နိုင်လျှင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဤသည်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိလျှင်တစ်နေ့တွင်ငါးမန်းများဖြင့်ရေကူးနိုင်ပေမည်။ ဒါအရောင်းအဝယ်ဘယ်လောက်ရူးသလဲ
ကုန်သွယ်မှု၏ဆွဲဆောင်အားသည်များစွာသောတစ်ခုမှာသင်သည်ငွေအမြောက်အများရနိုင်သည်။ Ferrari ရဲ့မြန်ဆန်သောအမျိုးသမီးများ၊ ကြွယ်ဝသောဆေးပြင်းလိပ်များ။ သငျသညျကအားလုံးကိုရှိသည်နိုင်! အမှန်တရားကဒီအောင်မြင်မှုရဲ့အထွreach်အထိပ်ရောက်ဖို့အနည်းငယ်သာလိုသည်။ မဖြစ်နိုင်တာကိုငါ့ရဲ့သင်တန်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရနိုင်တယ်။ လူတိုင်းကလုပ်နေကြ မင်းငွေရှာရတာမကြိုက်ဘူးလား။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းမှာလူတိုင်းသည်ငွေအမြောက်အများနှင့်ငွေအမြောက်အမြားကိုဆွဲဆောင်ရန်သွေးဆောင်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ယင်းကိုသိပြီးလူအမြောက်အများ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမြန်ဆန်သောအိပ်မက်များကိုအပြည့်အဝအသုံးချကြသည်။ သို့သော်ဤစိတ်ဓာတ်သည်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ကသင့်အားပြောပြမည့်အတိုင်းဖျက်ဆီးရန်လမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်လမ်းညွှန်မှုရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အမှားအမှန်အမှန်ကိုသိရှိခြင်းသည်အတွေ့အကြုံနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သင်ပုံတူပွားခြင်းအတွက်စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုကိုပြသနိုင်သည့်အရည်အသွေးရှိသောလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်ဤစိန်ခေါ်မှုကိုတိုတောင်းနိုင်သည်။အရောင်းအဝယ်ခန်းထဲမှာ RP လိုပဲ) ။ သို့သော်တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သောသင်၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုတီထွင်ရန်မှာသင့်အတွက်ဖြစ်ပြီးအချိန်ယူရလိမ့်မည်။
အသစ်ထွက်တဲ့ Ford vs. Ferrari ရုပ်ရှင်ကိုမကြာသေးခင်ကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ငါဇာတ်လမ်း၏အလွန်အကျွံအရှုံးမပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်၏အဓိကအရေးပါသော Le Mans ပြိုင်ပွဲမှာ Ferrari ကိုအနိုင်ယူဖို့ Ford ကား GT40 မော်ဒယ်ပြိုင်ကားသစ်ကိုမောင်းနိုင်သူတစ် ဦး တည်းသောကြယ်ကားမောင်းသူ Ken Miles ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပဲ။ ငါအရောင်းအဝယ်ဖြစ်အတွက်နှစ်ခုပြိုင်ကားသမားတူညီကြသည်မဟုတ်, လူတိုင်းလမ်းကြောင်း၏တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာရှိလိမ့်မည်ဟုထင်လို။ အရေးအကြီးဆုံးအရာကမင်းရဲ့ပြိုင်ဖက်ချင်းတွေကိုရိုက်နှက်တာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကိုသင်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြိုင်နေတာပဲ။ ဤအမှု၌ငါလိပ်နှင့်ယုန်ပုံဥပမာဟောင်းကုန်သွယ်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်ထင်ပါတယ်။ အရာရာကိုနှေးကွေးအောင်လုပ်မှသာရှေ့ကိုတက်နိုင်မှာပါ။ ဒါက Ferrari နဲ့ vs Ford မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏လမ်းကြောင်းကိုသင်အရှိန်အဟုန်နှင့်ကျွမ်းကျင်အောင်သင်ရမည်။ လိပ်ကယုန်ကိုရိုက်တယ်။
သင်အသိပညာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးစာရင်းအင်းဆိုင်ရာအစွန်းဖြင့်သက်သေပြထားသောစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးပါကကုန်သွယ်ရန်သင်ယူခြင်း၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ၊ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့မဆွေးနွေးသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ပြောနေကြတာပဲ! ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များနှင့်မကောင်းသောအကြားခြားနားချက်ရှိပါသည်။ သင်သည်ဒုတိယသဘောသဘာဝဖြစ်လာသည်အထိသင်ထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည့်အသံကောင်း။ ကောင်းစွာစဉ်းစားထားသောအလေ့အကျင့်များကိုပြုလုပ်ရမည်။ ထရေးဒင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအခြေခံသည်။ မြင့်မားသောအဆင့်တွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ရန်သင်အဆင့်မြင့်တွင်လေ့ကျင့်ရမည်။ သင်ဘယ်တော့မှကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိရ။ သင့် ဦး နှောက်သည်ကြွက်သားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအခြားကြွက်သားအုပ်စုများနည်းတူသင်အမြဲလေ့ကျင့်ရမည်။ ကြီးမြတ်သူများသည်အရုဏ်မတိုင်မီအားကစားရုံ၌အမြဲရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
သင်၏ဗဟုသုတ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်တည်ဆောက်ရမည်ဆိုပါကအင်တာနက်သည်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကတော့ဂန္ထဝင်တွေနဲ့စပြီးမင်းရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတည်ဆောက်ပါ။ ငါမူကားအစအ ဦး ၌ကျယ်ပြန့်သောပိုက်ကွန်ကိုချရန်၊ ယခု ထွက်၍ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြလော့။ အကယ်၍ သင်သည်စတင်ရန်အခက်အခဲရှိပါကကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါပုံစံတွင်ထားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါမည်။
Op-Ed ကဘယ်သူလဲ Forex Lens
Op-Ed သည်အတတ်နိုင်ဆုံးကုန်သည်ဖြစ်ပြီးဘဝကဏ္ av အားလုံးကိုလေ့လာသင်ယူသည်။ သူတစ်ပါးသည်သူတို့၏ပန်းတိုင်များနှင့်အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်။ Ed သည်ဘဏ္7ာရေးနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ (၇) နှစ်ရှိပြီးပွဲစားဘက်၌သာမက prop အရောင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကော်ပိုရိတ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးရွှေ၊ S&P နှင့် Forex ကိုအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ သူသည်နှစ်များတစ်လျှောက်အလွတ်သဘောရှိခဲ့သည့်အတွက်အက်ဒသည်ကျောင်းသားများကိုပိုမိုတရားဝင်ပုံစံချရန်စတင်စိတ်ဝင်စားသည်။ သူကစျေးဝယ်စကားပြောရန်အမြဲရရှိနိုင်ပါ။
ဒါမှမဟုတ်အစပြုပါ Forex ကုန်သွယ်ရေးအခန်း!
Forex Lens Instagram ကို
စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအချက်များဇူလိုင်လ 4, 2020 - 12: 00 ညနေ
အပတ်စဉ်အမြတ်ပြန်လည်စုစည်းခြင်း + နောက်အပတ် Market Insightဇူလိုင်လ 3, 2020 - 1: 40 ညနေ
၄.၈ သန်းအလုပ်အကိုင်ဇွန်လတွင် GBPUSD ဘောင်းဘီထပ်ထည့်သည်ဇူလိုင်လ 2, 2020 - 1: 53 ညနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာလွတ်လပ်ရေးရက်သတ္တပတ်ဇွန်လ 29, 2020 - 1: 15 ညနေ
အပတ်စဉ်အမြတ်ပြန်လည်စုစည်းခြင်း + နောက်အပတ် Market Insightဇွန်လ 26, 2020 - 1: 33 ညနေ
GBPAUD နှင့်အမေရိကန်ရေနံအမြတ်အစွန်း၊ AUD ကိုအတိုချုပ်ရန်နောက်ဆုံးအချိန်လား။ ကုန်သွယ်မှုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုတည်းဖြင့်သာလုပ်သော +400 pips!
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ chat, မှပံ့ပိုးသည် Your Fuse Inc.